अधिक मास, मलमासमा के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुदैन ? यस्तो छ शास्त्रिय र धार्मिक कारण: – ज्योतिष केशव गौतम – Complete Nepali News Portal
अधिक मास, मलमासमा के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुदैन ? यस्तो छ शास्त्रिय र धार्मिक कारण: – ज्योतिष केशव गौतम
हामी कहाँ लौकिक रूपमा नव विवाहित दम्पतीले मलमास छल्नुपर्ने भएकाले दुलही माइत गएर बस्ने प्रचलन छ । विशेष गरी यो महिनामा यौनसम्पर्क राख्नु वर्जित मानिएकाले यस्तो नियम लगाइएको हुनसक्छ ।